Subject: Casharka 16-aad: Xawaaraha Hard Disk-ga Thu Feb 10, 2011 3:45 am
Xawaaraha Hard Disk-ga
Sawir muujinaya qaybaha Hard Disk-ga
[You must be registered and logged in to see this link.] iyo Casharka
15-aad waxaan kaga hadalnay guud ahaan
waxa uu Hard Disk-gu yahay iyo qaybaha uu ka kooban yahay oo aan
ka soo qaadannay kuwa ugu muhiimsan oo ah kuwa sawirka kore ka
muuqda ee ay nambarradu ku ag qoran yihiin. Casharkaana waxaan ku
soo qaadan doonnaa xawaaraha Hard Disk-ga. Waxaan ka hadli
doonnaa qaybaha saamaynta ku leh xawaaraha Hard Disk-ga. Si aan
qaybahaas u tilmaanno waxaan adeegsan doonnaa sawirka kor kaaga
muuqda oo aan casharkaan ugu soo darnay arrintaas darteed.
Xawaaraha Hard Disk-ga waxaa loo kala qaadaa
dhowr qodob oo ay ugu muhiimsan yihiin:
Saddexdaas qodob ayaan halkaan mid mid ugu soo
Seek TimeSi [You must be registered and logged in to see this link.] ay akhbaar uga soo akhriyaan ama ugu qoraan [You must be registered and logged in to see this link.] Hard Disk-ga, waa inay horta tagaan [You must be registered and logged in to see this link.] markaas la rabo in wax laga soo akhriyo ama wax
lagu qoro. Wakhtiga ay arrintaasi qaadataa wuxuu ku xiran
yahay inta ay le'eg tahay fogaanta u dhexaysa Track-ga la
raadinayo iyo Track-ga ay markaas Heads-ku taagan yihiin.
Wakhtiga celcelis ahaan ay Heads-ka ku qaadato inay
tagaan hadba Track-ga loo baahan yahay ayaa la yiraahdaa Seek
Time. Seek Time-ku wuxuu si toos ah ugu xiran yahay
xawaaraha Actuator-ka oo ah qaybta isku haysa isla
markaana dhaqaajisa Heads-ka (Fiiri sawirka kore
qaybta uu nambarkeedu yahay 4). Seek Time-ka waxaa
lagu cabiraa waxa loo yaqaan milliseconds oo loo soo
gaabiyo "ms" una dhigma hal ilbiriqsi (second)
oo loo qaybiyay milyan qaybood qayb ahaan. Seek Time-ka
Hard Disk-yada casriga ah ee maanta la isticmaalaa wuxuu
celcelis ahaan u dhexeeyaa 4 ilaa 10 ms. Arrintaa Waxaad
garab dhigtaa xawaaraha Memory-da oo sidaan [You must be registered and logged in to see this link.] ku soo sheegnay lagu cabiro nanoseconds (ns) oo
u dhigma hal ilbiriqsi oo loo qaybiyay bilyan qaybood qayb
ahaan. Horeyna waxaan u soo sheegnay in Memory-du ay aad
uga gaabiso Processor-ka.
Halkaa waxaad ka garan kartaa in Hard
Disk-gu uu ka mid yahay qaybaha kumbiyuutarka kuwa
xawaare ahaan ugu gaabiya. Waxaa in badan dhacda in
qaybaha kale ee kumbiyuutarku ay iska fadhiyaan oo ay
sugaan in Hard Disk-gu uu hawsha qaybta kaga aaddan soo
dhammeeyo. Seek Time-ku wuxuu ka mid yahay uguna
horreeyaa waxyaabaha Hard Disk-ga wakhtiga ugu badan ka qaata, mar kasta
oo uu Seek Time-ku sii yaraadana waxaa kor u kaca
xawaaraha Hard Disk-ga taasoo iyaduna kor u qaadda
xawaaraha hawl qabadka guud ee kumbiyuutarka. Sidaa
darteed shirkadaha Hard Disk-yada sameeyaa waxay ku
tartamaan xoogna ay saaraan in ay had iyo jeer hoos u
dhigaan Seek Time-ka Hard Disk-ga. Waxaa suuqa Hard
Disk-yada caadi ka noqotay in Seek Time-ka laga dhigo
xawaaraha Hard Disk-ga oo dhan. Waxaad meelaha Hard
Disk-yada lagu gado inta badan ka maqlaysaa iyadoo
tusaale ahaan la oranayo xawaaraha Hard Disk-gaani yahay
9 ms, taasoo inta badan lagu saleeyo Seek Time-ka Hard
Disk-gaas. Taasina waxay kuu caddaynaysaa sida uu Seek
Time-ku muhiim ugu yahay xawaaraha Hard Disk-ga.
Latency Sida aan
hore uga soo hadalnay marka Platters-ka waxa laga soo
akhrinayo ama wax lagu qorayo waxaa loo baahan yahay in
Heads-ku ay horta tagaan Track-ga markaas loo baahan
yahay. Marka ay Heads-ku halkaa tagaan waxay sugaan inta [You must be registered and logged in to see this link.] ay akhbaartu ku qoran tahay uu ka imaanayo
halka ay Heads-ku markaa taagan yihiin. Wakhtiga ay taasi
qaadato wuxuu ku xiran yahay fogaanta uu Sector-ka la
rabaa u jiro halka ay Heads-ku markaa taagan yihiin.
Celceliska wakhtiga ay qaadato in Sector-ka la rabaa uu
ku yimaado halka ay Heads-ku joogaan ayaa la yiraahdaa Latency.
Latency-ga Hard Disk-gu wuxuu si toos ah ugu xiran yahay
xawaaraha uu ku wareego Spindle-ka Hard Disk-ga oo ah
tiir dhexaadka ay Platters-ku ku dul rakiban yihiin ee
wareejiya (Fiiri sawirka kore qaybta uu nambarkeedu
yahay 3). Xawaaraha Spindle-ka waxaa lagu cabiraa
waxa loo yaqaan RPM (Revolutions Per Minute) oo u taagan
inta wareeg ee uu Spindle-ku sameeyo halkii daqiiqo.
Xawaaraha Spindle-ka Hard Disk-yada maanta la isticmalo
wuxuu u dhexeeyaa 4200 RPM ilaa 15000 RPM.
Latency-ga waxaa sida Seek Time-ka lagu
cabiraa Milliseconds (ms) waxaana xisaab ahaan lagu helaa
30000 (soddon kun) oo loo qaybiyey xawaaraha Spindle-ka.
Tusaale ahaan haddii xawaaraha Spindle-ku uu yahay 4200
RPM, markaa wuxuu Latency-gu noqonayaa 30000/4200 = 7.1
ms. Haddiise uu xawaaraha Spindle-ku yahay 15000 (Shan
iyo tobon kun) RPM, markaa Latency-gu wuxuu noqonayaa
30000/15000 = 2 ms.
Marka laga hadlayo xawaaraha Hard Disk-ga waxaa sidaan
hore u soo sheegnay inta badan aad looga hadlaa Seek
Time-ka, waxaadse halkan ka aragtaa in Latency-gu uu door
weyn ka cayaaro xawaaraha Hard Disk-ga oo uusan Seek
Time-ka kaligiis ku filnayn cabirridda xawaaraha rasmiga
ah ee Hard Disk-ga. Sidaa darteed waa muhiim in marka aad
Hard Disk gadanayso aad ogaato Latency-gu inta uu yahay
ama ugu yaraan xawaaraha Spindle-ku inta uu yahay si aad
markaa iskaa ugula soo baxdo Latency-ga.
saamaynta ku leh xawaaraha Hard Disk-ga oo la isu geeyay
ayaa waxaa la isku yiraahdaa Access Time. Qodobada uu
Access Time-ku ka kooban yahay waxaa ugu muhiimsan labada
qodob ee aan kor uga soo hadalnay ee kala ah Seek Time
iyo Latency. Haddii uu tusaale ahaan Hard Disk-ga Seek
Time-kiisu uu yahay 8 ms, Latency-giisuna uu yahay 5 ms,
markaa wuxuu Access Time-ka Hard Disk-gaasi noqonayaa 8 +
5 = 13 ms. Access Time-ku waa qodobka ugu muhiimsan ee
lagu cabbiro xawaaraha dhabta ah ee Hard Disk-ga waayo
wuxuu sheegayaa wakhtiga ay Hard Disk-ga ku qaadato inuu
akhbaar ka soo akhriyo ama uu ku qoro Platters-ka.
Inkastoo uu Access Time-ku yahay
qodobka ugu muhiimsan xaqiiqadana ugu dhow ee lagu
cabbiro xawaaraha Hard Disk-ga, haddana waxaa la yaab leh
in ay yar tahay inta la isticmaalo oo shirkada Hard
Disk-yada sameeyaa waxay had iyo jeer ka door bidaan
qodobada kale sida Seek Time-ka. Waayo qodobada oo la
kala qaado ama xataa mid keliya laga soo qaataa waxay
Hard Disk-ga u muujinaysaa sidii inuu ka dheereeyo
xawaarihiisa dhabta. Sidaa darteed waa muhiim in marka
aad Hard Disk gadanayso ama aad is barbar dhigayso laba
Hard Disk aad ogaato Access Time-ka Hard Disk-ga si aad u
ogaato xawaaraha dhabta ah ee Hard Disk-gaas. Haddii
aysan kuu suurtoobayn inaad ogaato Access Time-ka waxaad
ugu yaraan codsataa inaad hesho Seek Time-ka iyo
Latency-ga. Waayo labadaas qodob oo la isu geeyay waxay
ku siinayaan qiime aad iyo aad ugu dhow Access Time-ka
noocyada Hard Disk-ga (IDE ama SCSI).
Create a forum on Forumotion | Society and Culture | Misc | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Create a free blog